Somalia online: Lacag lagu dhisi lahaa, Safaraada Soomaalida Kenya oo la lunsaday(Cali-Muqalas oo falkan lagu eedeynayo)‏
Lacag lagu dhisi lahaa, Safaraada Soomaalida Kenya oo la lunsaday(Cali-Muqalas oo falkan lagu eedeynayo)‏
Thursday, 29 November 2012 00:57
Safaraaada soomaaliya ku leedahay dalka kenya ayaa ku shaqayso dhismo kiro ah ayada oo arinkaasi lagu macneeyay in safaaradi soomaliya ku laheed halkaasi u baahan tahay dayac tir.
safaarada Soomaaliya ku leheed kenya oo uu iibsaday nin hindi ah, si sharci daro ah ayaa dacwad uu ku furay qunuslki geeriyoday allaha u naxariste dib ugu soo laabatay gacanta safaarada.
balse waxaa ayaan daro noqatay in lacago fara badan oo loogu tala galay dayac tirka safaarada lunsado safiirka u fadhiya Soomaaliya halkaasi Maxamed Cali Ameriko.
Safiirka ayaa sheegay sida aan warar hoose ku helayno in dhaqaalahaasi u qaatay lacago uu sheegay in aay kaga baxeen soo celinta safaarada Soomaaliya oo la ogsoon yahay in uu soo celinteeda qeeb lixaad leh ka qaatay qunsulki geeriyoday allaha u naxariste .
dadka qaar ayaa ku macneeyay hadalka safiirka in uu ka caraysan yahay war dhawaan ka soo yeeray wasaarada arimaha dibada Soomaliya, oo ahaa in la badali doono safiirada in muda ah safiirka ka ahaa dalalka dibada.
Dhanka kale waxaa safaarada Soomaaliya ku leedahay dalka kenya cabasho xoogan ka muujinaya jaaliyada ogadeeniya oo sheegay in dad badan oo jaaliyadaasi ka mid ah loo diiday passport ka soomaaliga ayaga oo lagu yiri waxaa tahiin itoobiyaan.